Ukushona kwelanga: yazi ukushona kwelanga okuhle kakhulu emhlabeni | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Zonke izinsuku ziqala lapho kuphuma ilanga ziphele ekushoneni kwelanga. Siyazi ukuthi iplanethi yethu igcwele izindawo ezibabazekayo lapho singaya khona ukuze simane sijabulele izindawo ezinhle kakhulu. I- ukushona kwelanga kungabonakala kufana njengoba kumane ukunyamalala kwelanga emkhathizwe. Kodwa-ke, kunezindawo zomhlaba lapho lokhu kushona kwelanga kubukeka kungcono kakhulu futhi kuvela imizwa ehlukile ehlukile ngaphakathi.
Ngakho-ke, kule ndatshana sizokutshela ukuthi yikuphi ukushona kwelanga okuhle kakhulu nokuthi kufanele ukujabulele kuphi.
1 Ukushona kwelanga emhlabeni
2 Ukushona kwelanga okuhle kakhulu emhlabeni
2.2 Ukushona kwelanga ku-Avenida de los Baobabs
2.3 Ukushona kwelanga eGrand Canyon
2.4 UCala Comte
2.5 I-Oia Greece
2.6 Ukushona kwelanga okuhle kakhulu eNtabeni iFuji
2.7 IVictoria Falls
2.8 Ukushona kwelanga okuhle kakhulu eRio de Janeiro
2.9 i-San Francisco
Ukushona kwelanga emhlabeni
Khumbula ukuthi indawo ngayinye lapho sihlala khona inelanga elithile. Kukhona izindawo lapho izikhumbuzo zasemadolobheni ezinhle kakhulu noma izidalwa zivele ngokungahleliwe kusuka emvelweni eziba ubuciko beqiniso ezitholakala. Ngaphandle kwalokhu, kufanele kukhunjulwe ukuthi kunezikhathi eziningana zosuku lapho lobu buhle bamasiko bugcwala ngokubukeka okumangazayo. Kumayelana nokushona kwelanga nokuphuma kwelanga.
Sizogxila lapho inkanyezi yenkosi idala ujikelezo esibhakabhakeni futhi isondela eduze ne-eksisi emakwe umkhathizwe. Kumayelana nokushona kwelanga. Kungaleso sikhathi lapho imisebe yokugcina yelanga iveza imidwebo yezakhi ezinhle ezakha amadolobha, izintaba futhi, ngokuvamile, zonke izindawo lapho kubusa khona imvelo. Singabona ukushona kwelanga okuhlukahlukene kusuka emadolobheni amaphakathi futhi sikujabulele njengoba nje sibuka ukushona kwelanga sisentabeni. Konke kunombono kuye ngokuthanda komuntu ngamunye.
Kumele kukhunjulwe ukuthi ukushona kwelanga kuhlala kungumlingo, noma kuthokozelwa ngokubambisana noma ngedwa. Kunabantu abathanda ukubuka ukushona kwelanga ukuze babonakalise bodwa noma bathatha umuntu abaxhumene naye ukujabulela ukushona kwelanga. Okunye ukushona kwelanga okwaziwa kakhulu yilokho okushiya ubuhle obungakholeki. Kusuka e-Asia kuye eMelika, kudlula eYurophu nase-Afrika sithole ukushona kwelanga okuhlaba umxhwele kakhulu emhlabeni. Sizobona ukuthi yikuphi ukushona kwelanga okuyinhloko ongaphuthelwa yikho.
Ukushona kwelanga okuhle kakhulu emhlabeni
Ingesinye sezimangaliso eziyi-7 zomhlaba ekwazi ukuhlaba umxhwele noma yimuphi umhambi oya edolobheni lase-Agra. Ekushoneni kwelanga ungajabulela indawo enhle engakwazi ukuphindwa kunoma yisiphi isithombe. Lesi sigodlo esikhulu sihlanganisa ubuciko bamaSulumane, basePheresiya nabaseNdiya futhi siba yindawo enhle yokushona kwelanga okuyingqayizivele.
Ukushona kwelanga ku-Avenida de los Baobabs
Izihlahla zeBaobabs zehlukile eMadagascar. Lezi yizinto zemvelo ezivikelwe ngokuphelele yimvelo yazo ehlukile nobuningi bayo kule ndawo. Ziyizihlahla ezingaphila isikhathi esingaphezu kwenkulungwane yeminyaka. Ngenxa yalokhu, enye yezindawo ezivakashelwe kakhulu isiqhingi saseMorondava. Lapha izivakashi zilinda ukuphuma kwenyanga ukuze zibone ukushona kwelanga okuhle kakhulu okungajatshulelwa kusuka e-Afrika.
Ukushona kwelanga eGrand Canyon
Uma siya eGrand Canyon esenyakatho ye-Arizona singathatha isithombe kunoma yimuphi umkhawulo wewa. Abahambi abafuna kakhulu abanelisekile ngalezi zithombe, kodwa kufanele bacabange ngokushona kwelanga kulomhosha onikeza imibala efudumele. Lo mhosha wakhiwa ukuguguleka koMfula iColorado ngenxa yezigidigidi zeminyaka yesenzo sokuguguleka. Ingenye yokushona kwelanga okuhle kakhulu ongakujabulela.
Yize i-Ibiza yaziwa eSpain njengenye yezindawo ezinamaqembu amahle kakhulu, ayenzi nje kuphela ngayo. Futhi ukuthi inamabhishi amahle kakhulu nama-coves kulo lonke elaseSpain. Ngaphezu kwalokhu, kunokushona kwelanga okuhlaba umxhwele kakhulu kulo lonke elaseYurophu. Izivakashi eziningi ziza eComte cove ukuze zikwazi ukubona ukushona kwelanga phezulu lapho kungabonakala khona amatshe amancane neziqhingana eziphuma emanzini.
Kutholakala edolobheni elincane eGrisi, sibona i-Oia njengenye yamadolobha amakhulu avela kuma-postcard asehlobo avela eSantorini. Uma kulokhu sifaka ukukhanya kwelanga okuncane kunensika yokushona kwelanga singabona inkumbulo emangalisayo. Futhi ukuthi imilingo yokushona kwelanga ixubene kanye nezindlu zendabuko zabamhlophe eziqhingini zaseGrisi futhi umbala odlamkileyo ulahlekile uze unikeze ukuvelela kusihlwa saseGrisi.
Ukushona kwelanga okuhle kakhulu eNtabeni iFuji
INtaba iFuji itholakala eJapan futhi iyisiqongo esiphakeme kunazo zonke. Kusukela ezikhathini zasendulo le ndawo ibithathwa njengendawo engcwele futhi engokomoya. Ingenye yezindawo ezifunwa kakhulu yilabo abajwayela izintaba, ngoba iningi labo laliphezulu phezulu ukuze likwazi ukucabanga ngokushona kwelanga nokuphuma kwalo. Akungabazeki ukuthi ingenye yezindawo ezinhle kakhulu emhlabeni ukuba nombono omuhle we-panoramic wesibhakabhaka nezwe lonke.
Etholakala eZambia naseZimbabwe, lezi zimpophoma zinikela ngokushona kwelanga okuhle kakhulu emhlabeni. Iyimpophoma enkulu kunazo zonke emhlabeni ngamamitha ayi-108 ukuphakama. Hhayi nje kuphela ukuthi ungajabulela ukushona kwelanga ngemisebe yokugcina yelanga, kodwa futhi uzobona nokuthi ziboniswa kanjani ezimpophothweni zinikeza ubusuku obugcwele izinkanyezi. Sekungenye yezindawo ezifunwa kakhulu, ukuba yikhoneni elifanele lesinye sezipiliyoni zemvelo ezingakholeki emhlabeni.
Ukushona kwelanga okuhle kakhulu eRio de Janeiro
Siya eBrazil ukuyojabulela iphathi nokushona kwelanga. Idolobha lisendaweni engaphezu kwamamitha angama-700 ngaphezu kogu lolwandle. Lokhu kukwenza kube iphuzu lokusetshenziswa ukuze kubonakale noma yikuphi. Kunezindawo zokubuka eziningi lapho ungabona khona lonke idolobha futhi uthokozele okunye kokushona kwelanga okuhle kuyo yonke iLatin America.
Siye e-United States ukuyobona elinye lamadolobha adume kakhulu. Ngokukhanya okuncane emini ingahlobisa yonke indawo ngokwendawo futhi ingabonakala ebhulohweni layo elidumile lokumisa.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngokushona kwelanga okuhle kakhulu emhlabeni.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Ukushona kwelanga
Imibala yamaplanethi wesistimu yelanga